Kitapo fahavaratra Zara izay mamafa izao vanim-potoana | Bezzia
Susana godoy | | mameno
Manaitra antsika foana i Zara amin'ny andiana hevitra ilaintsika isan'andro. Amin'izy ireo rehetra izao dia sisa isika manana inonas kitapo fahavaratra. Satria izy ireo dia ampahany amin'ny fijerinay tsara indrindra ary ankehitriny kokoa rehefa te-hampideradera azy ireo izahay amin'io fihetsika tsotra io ary atambatra amin'ny akanjo fahavaratra.
Ilaina foana ny kitapo, koa ankehitriny dia tsy azonao atao ny tsy mahita an'io filaharany io izay ho hitanao amin'ny vidiny ambany tokoa. Eny, Toa lasa matanjaka noho ny hatramin'izay ny varotra ary voatazona izy ireo. Tena ho hitanao io maodely tianao io!
1 Kitapo fahavaratra, ary azo haverina?
2 Kitapo mirandrana ao Zara
3 Ny kitapo tote
4 Ny fitambarana voalohany indrindra eo amin'ny kitapo fahavaratra
Kitapo fahavaratra, ary azo haverina?
Toa hita mazava tsara fa eny i Zara. Ny kitapo dia azo entina amin'ny fomba maro, fa iray ihany izao no azo entina amin'ny safidy maromaro. Izany hoe, misy ny pirinty ety ivelany na any anatiny. Eny, Ny lamba azo avadika dia iray amin'ireo hevitra tena tiantsika. Ankehitriny dia mbola hataon'izy ireo kely ihany satria tena mahavariana ny vidiny. Ankehitriny ianao dia afaka mankafy ny kitapo manokana sy mampahazo aina anao, amin'izay azonao alehanao na aiza na aiza fa miaraka amin'izay ilainao foana. Tianao?
Kitapo mirandrana ao Zara
Amin'ity fotoana ity amin'ny taona, eny, afaka milaza isika fa ny kitapo mirandrana Izy ireo koa dia iray amin'ireo hevitra manokana sy nandrasana hatry ny ela. Satria izy ireo dia fikitika mahazatra fa tsy very ny votoatin'ny fijery tsirairay. Ka raha mbola tsy nahazo ny iray amin'izy ireo ianao dia aza manahy. Satria i Zara no miloka amin'io famaranana io no hahagaga anao. Na dia tianay aza ny miverina amin'ny laoniny, amin'ity tranga ity dia mbola kely kokoa ihany. Ny fomba voajanahary omeny antsika dia tena lavorary. Ankehitriny dia mila mampiditra wedges na kapa fisaka miaraka amina fomba mahazatra mahazatra ianao ary dia izay.
Tsy mandeha intsony ny milaza fa ny randrana dia hita amin'ny loko tsotra, fa koa amin'ny loko mitambatra ary ny mavitrika indrindra. Eny, toa nahatratra hevitra toy izany avy any Zara ihany koa ny vokany modely, noho izany dia tsy tokony hohadinoina izany. Tena ahazoana aina ny mitondra ny zavatra rehetra ilainao.
Ny kitapo tote
Izy io dia iray amin'ireo fomba izay tsy azonao hadinoina mihitsy. Noho io antony io, amin'ny fahavaratra koa dia manondro ny fironana izy io. Araka ny fantatrao tsara, kitapo malalaka kokoa izy io ary, araky ny anarany, dia hovidiana izy io. Azo antoka fa rehefa tonga ny fialan-tsasatrao dia hanana fotoana bebe kokoa ianao hanokanana azy hanome ny tenanao ireo izay tadiavinao. Ka mila kitapo iray karazana eo anilanao koa ianao. Kitapo miasa foana izy io ary bebe kokoa, rehefa hitantsika fa avela hitambatra amin'ny alokaloka amin'ny volontany na beige. Hatramin'io fomba io dia azontsika ampiana ny akanjo sy ny kiraro izay tiantsika hatrizay. Inona no hampifangaroanao azy?
Ny fitambarana voalohany indrindra eo amin'ny kitapo fahavaratra
Ny kojakoja dia tokony ho fotony ilaina amin'ny endrika tsara indrindra. Saingy ao anatin'izany, ny originality dia tsy azo avela koa, satria ny fanatrehana dia hitondra ny toetra hanakaiky kokoa antsika. Izany no antony ahitantsika ireo safidy toa itiavantsika azy ireo ato anatin'ny kitapo fahavaratra avy any Zara.
Safidy izay manambatra ny loko sy famolavolana misy ny kianja eo afovoany. Ankehitriny dia azonao atao ny mandray azy roa amin'ny fisotroana amin'ny terrasika ary rehefa miantsena ianao. Raha ny zavatra tsara dia izy ireo dia hizatra isaky ny fotoana. Manana tahony manify izy nefa malalaka sy mahatohitra afaka mitondra azy mihantona na eny an-tanana. Tsy afaka mangataka zavatra hafa intsony izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » mameno » Jereo ny kitapo fahavaratra avy any Zara izay manafosafo
Inona no atao hoe lipedema? Fambara sy fitsaboana